आजको चुनावमा दुबै डेमोक्र्याट्सले जिते खुल्नसक्छ ११ मिलियन कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्डमा जाने बाटो « Khasokhas
आजको चुनावमा दुबै डेमोक्र्याट्सले जिते खुल्नसक्छ ११ मिलियन कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्डमा जाने बाटो
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएपछि अमेरिकामा रहेका झण्डै ११ मिलियन कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्ड हुँदै अमेरिकी नागरिकताको बाटोमा लगिएला ? यो प्रश्न यतिखेर सबैको मनमा उब्जेको छ । तर यसको जवाफ सहज भने छैन ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिका रुपमा कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै जो बाइडेनले अमेरिकामा रहेका झण्डै ११ मिलियन कागजपत्रविहिनलाई नागरिकताको बाटोमा लैजाने बिल सदनमा पठाउने योजना बनाएका छन् । बाइडेन अभियानका अधिकारीका अनुशार कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्डहुँदै नागरिकताको बाटोमा लैजाने बिल संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा पहिले पेश गरिनेछ ।
तर यो बिल पारित हुनका लागि सिनेटमा डेमोक्र्याट्सको बहुमत हुन आवश्यक छ । सिनेटमा डेमोक्र्याट्सको बहुमत हुनका लागि आगामी आज जनवरी ५ मा जर्जियामा सिनेटरका लागि भएको चुनावमा डेमोक्र्याट्सले दुबै सिट जित्न जरुरी हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा डेमोक्र्याट्सहरुको बहुमत आइसकेकाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नमा भने समस्या देखिन्न ।
सिनेटमा अहिले ४८ सिट डेमोक्रेटिक पार्टीले र ५० सिट रिपब्लिकन पार्टीले जीतेका छन् । जर्जिया दुबै सिट डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदबारले जीतेमा उपराष्ट्रपतिले गर्ने टाइब्रेक मतका आधारमा सिनेटमा डेमोक्रेटिक पार्टीको नियन्त्रण हुनेछ ।
तर जर्जियाको दुईवटै वा दुईवटामध्ये एउटा सिटमा मात्र रिपब्लिकनले जीतेमा सिनेटमा रिपब्लिकनको बहुमत कायम हुनेछ । त्यसैले जर्जियाको चुनावले सिंगै अमेरिकाको इमिग्रेशन लगायतका कैयन परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्नसक्ने देखिएको छ । सिनेटमा रिपब्लिकनको बहुमत कायम भएमा भने बाइडेनका कैयन योजनाहरु संसदबाट पारित हुनमा असहज मात्र होइन असम्भव नै हुनेछ ।
डाका कार्यक्रम तत्कालिन राष्ट्रपति बराक ओबामाले सुरु गरेका हुन् । त्यतीबेला जो बाइडेन उपराष्ट्रपति रहेका थिए । डाकाले झण्डै साढे ६ लाख बाल्यकालमा अमेरिकामा आएका कागजपत्रविहिनलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ । जसमा नेपालीहरु झण्डै ५ दर्जन रहेका छन् । टीपीएसबाहक नेपालीहरु भने झण्डै ९ हजारको हाराहारीमा रहेका छन् ।
पदभार सम्हालेकै पहिलो दिन बाइडेनले ट्रम्पबाट जारी यात्रा प्रतिबन्धहरु खारेज गर्ने योजना बनाएका छन् । ट्रम्पले यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका १३ देशहरुमा अधिकांश मुस्लिम बाहुल्य रहेका देशहरु छन् । सन् २०१७ मा कार्यभार सम्हाल्न बित्तिकै ट्रम्पले यात्रा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए ।
ट्रम्पले कामदार भिषामा कडाई गर्ने कैयन मापदण्डहरु ल्याएका छन् । बाइडेनले ती मापदण्डहरु पनि खुकुलो पार्ने योजना बनाएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२१ का लागि अमेरिका भित्राउने शरणार्थीको संख्या १५ हजारमा झारेकोमा बाइडेन १ लाख २५ हजार बनाउने योजना बनाएका छन् ।
मेक्सिको र अमेरिकाको सिमा क्षेत्रमा ट्रम्पले लगाइसकेको पर्खाल बाइडेनले भत्काउने छैनन् । तर आफ्नो कार्यकालमा थप एक इन्चपनि पर्खाल नलगाइने बाइडेनले बताएका छन् । सिमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि आधुनिक मापदण्डहरु अपनाउने बाइडेनको योजना छ ।
सिमाक्षेत्रमा एसाइलम खोज्नेलाई मेक्सिको नै फिर्ता पठाउने नीति ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको छ । बाइडेनले यो नीतिलाई खारेज गरी एसाइलममा गरिएको कडाई खुकुलो पार्ने योजना बनाएका छन् ।
यसपटक हाउसमा डेमोक्र्याट्सको बहुमत कायम भएको छ । तर संसदका दुईवटा सदनमा दुईपार्टीको नियन्त्रण कायम रहेको अवस्थामा डेमोक्र्याट्सले दुईदलीय सहमति विना ल्याएका कुनै पनि बिलहरु पारित हुन सहज हुनेछैन ।
राष्ट्रपति बाइडेन भएकै अवस्थामा दुबै सदनमा उनीहरुको नियन्त्रण कायम भएमा के गर्नेछन्? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यद्यपी डाका र टीपीएसले समेटेकाहरुलाई देशनिकाला हुनबाट जोगाउन भने बाइडेनले कार्यकारी आदेशमार्फत सहजै सक्नेछन् ।
जनवरी २२ देखि लागु हुने गरी बाइडेन प्रशासनले एकसय दिनसम्मका लागि निश्चित प्रकारका देशनिकालाका आदेश
अध्यागमन अदालतको सुनुवाई स्थगन फेब्रुअरी १९ सम्म
न्युयोर्कको अध्यागमन अदालत लगायत अमेरिकाका अन्य कैयन अध्यागमन अदालतमा हिराशतमा नरहेकाहरुको सुनुवाई फेब्रुअरी १९ सम्म
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोनाको महामारी फैलिनबाट रोक्ने उद्देश्यले ३० देशबाट अमेरिका आउनमा रोक लगाउने